မဲမဲမြင်တိုင်းမကလစ်ပါနဲ ့။ (beware) — MYSTERY ZILLION
မဲမဲမြင်တိုင်းမကလစ်ပါနဲ ့။ (beware)
April 2011 edited April 2011 in Internet Security
အခုနောက်ပိုင်း URL shortener နဲ့attack လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကတော်တော်များပါတယ်။ ပထမဆုံးစလာတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ chatbox မှာ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ ့လာတာပါ။ အောက်ကပုံစံမျိုးတွေပါ။
hi, lol check out this girl,what she did.. i cant believe this video : goo.gl/BnFMN
နောက်ပုံစံတစ်မျိုးကတော့ အားလုံးစိတ်၀င်စားလောက်တဲ့ Video clip တွေကို facebook ပေါ်မှာ share တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နှိပ်မိအောင် ဆွဲဆောင်နေတာပါ။ အသေးစိတ်ကို
ရေးထားတာရှိပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ wall ပေါ်မှာ share တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ ့လာတာပါ။ ကျွန်တော်ဆီမှာတော့ ဒီနေ ့မှသတိထားမိပါတယ်။ လာတဲ့ပုံစံက အောက်ပါအတိုင်းပါ။
ဆိုပြီး url shortener နဲ့shorten လုပ်ထားတဲ့ short url ပဲတွေ ့ရမှာပါ။
ကျွန်တော်ပြောတာနှိပ်မိရင် ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာဆိုတဲ့အပိုင်းကိုမရောက်သေးဘူး။ နှိပ်မိရင် ကိုယ်က victim ဖြစ်ပြီး အခြားသူတွေကို အထက်ပါ message တွေကို သွားပို ့မိနေမှာပါ။ video clip ဆိုလည်းထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ ကိုယ်က အဲဒီ video clip ကို like လုပ်လိုက်ပါတယ်လို ့ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ တခြားသူက ဟိုကောင်တောင် ကြိုက်သေးတာပဲဆိုပြီး နှိပ်ကြည့် အဲဒီလိုနဲ ့သံသရာလည်နေမှာပါပဲ။ ကိုယ် wall မှာလာတင်တယ်ဆိုလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။. ကိုယ် wall မှာတောင်တကူးတက လာတင်သေးတာပဲ ဆိုပြီးတော့ နှိပ်ကြည့်မိမှာပါပဲ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့ သတိထားမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပျံနှံပုံကတော့ zombie တွေလို တစ်ယောက် ကိုက်လိုက်တာနဲ ့အကိုက်ခံရတဲ့တစ်ယောက် zombie ဖြစ်သွားပြီး ပျံနှံသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ ဒါအပြင်မိမိတို ့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခိုးယူတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုဆိုတော့ ကျွန်တော် တို့url shortener တွေမသုံးပဲနေလို ့ရမလား ???
ကျွန်တော်တို့url shortener တွေသုံးရတယ်ဆိုတာ တခါတရံမှာ လင့်အမှန်ကို publicly မသိစေချင်တာပဲဖြစ်စေ twitter လို microblogging platform တွေမှာရော facebook လို social networking platform တွေမှာပါ စာလုံးအရေအတွက်က limit ဖြစ်တဲ့အတွက် စာလုံး အရေအတွက် save ဖြစ်အောင်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်သလဲ။ ????
(https://www.facebook.com/SkipSoft ) ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် ဟိုးအပေါ်ဘက်မှာရေးထားတဲ့ ပထမဆုံးလင့်ကလည်း အသုံး၀င်ပါတယ်။ နောက်ဒါအပြင် ဒီလိုမဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို ့တက်နိုင်သလောက် facebook.com ကိုအသိပေးတဲ့အနေနဲ့report လုပ်လို ့ရပါတယ်။ ကိုယ်ပေါ်လာတင်တဲ့ဟာတွေက malicous ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် post ရဲ့အပေါ် ညာဘက်ဒေါင့်လေးက အမှား button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ report abuse ကိုနှိပ်ပြီး spam or scam ဆိုတာကိုရွွေးပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် နောက်အခြားလူတွေမကလစ်အောင် အဲဒီ post ကိုဖျက်လိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ ့မှတ်ယူထားရမှာကတော့ အထက်ပါ ပုံစံအတိုင်း တသမတ်တည်းလာမယ်လို့လှေနံဓါးထစ်မှတ်ယူလို ့တော့မရပါဘူး။ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ ့မကလစ် လစ်ချင်အောင် ဆွဲဆောင်ဖို ့ကြိုးစားနေတယ်လို ့မှတ်ယူရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။
Ouch! Even it say SEXY, don't click that link. ~.~